लक्ष्मी उप्रेती लामो समयदेखि बालसाहित्यका क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएको छ । वनिता प्रकाशनका तर्फबाट उहाँले धेरै बालसाहित्यका कृति प्रकाशित गर्नुभएको छ । उहाँको जन्म २०१५ साल साउन २३ गते तेर्‍हथुमको आठराई, हाङपाङमा भएको हो । उहाँ पिता वृहस्पति र माता यज्ञमाया प्रसाईकी छोरी हुनुहुन्छ । उहाँले सातवटा बालसाहित्यका कृति लेख्नुभएको छ । ती पुस्तकहरू ‘कृष्णको पछुतो’ (बालकथासंग्रह), ‘मनेको म्याँ म्याँ’ (कवितासंग्रह), ‘कर्मको फल’ (बालकथासंग्रह), ‘कमिलाको ताँती’ (चित्र कवितासंग्रह), ‘बुद्धिमानी बाँदर’ (बालकथासंग्रह), ‘साहसी आकांक्षा र पवन परी’ (बालउपन्यास) र ’सुनको अन्डा दिने चरी’ (बालकथासंग्रह) लेख्नुभएको छ । यी पुस्तकबाहेक उहाँले अरु चार पुस्तक लेख्नुभएको छ भने दर्जनौं सम्पादन गर्नुभएको छ । उहाँ ‘वनिता’ साहित्यिक पत्रिका निकाल्नुहुन्छ । विभिन्न संस्थासँग आवद्ध उप्रेतीका बाल्यकालका सम्झना प्रस्तुत छन् : Read More »
जी.के. सिंह पुराना कलाकार र शिक्षक हुनुहुन्छ । उहाँको पूरा नाम गिल्बर्ट कालु सिंह हो । उहाँ ८३ वर्षका हुनुभयो । सिंह ललितपुरको जावलाखेलमा बस्नुहुन्छ । उहाँ बुबा दलवीर सिंह र आमा भक्तमाया सेलिनाका साहिला छोराका रूपमा सन् १९२३ मा जन्मनुभएको हो । सिंहको पुख्र्यौली घर बझाङ हो । दार्जिलिङमा स्कुलको पढाइपछि त्यहीँ आई.एस्सी., कोलकातामा बी.ए. पढ्नुभयो । ७३ वर्षको हुँदा उहाँले बी.एड. र ७९ वर्ष पुग्दा बी.एल. पास गर्नुभयो । एक दर्जनजति पुस्तक लेखेक सिंहका बाल्यकालका सम्झना प्रस्तुत छ : Read More »
दक्षिण अफ्रिकामा नेपाली भेडा संकटमा !!
नेपालबाट दक्षिण अफ्रिका ११ हजार ८३३ दशमलव ४ किलोमिटर (७ हजार ३५२ दशमलव ९ माइल) टाढा छ । उड्नुपर्दा ९ हजार २१९ दशमलव ५३ किलोमिटर (५ हजार ७२८ दशमलव ७५ माइल) पुरा गर्नुपर्छ । डिस्टेन्सफ्रमटु डट नेट त्यसै भन्छ । (क्लिक गर्नुस् त !)